Izinsizakalo Zokuhlola Ikhaya Ukuthengisa Nokuqasha e-United States
Izinsizakalo Zokuhlola Ikhaya in Sylmar
Izinsizakalo Zokuhlola Ikhaya in California
Ishicilelwe ngu Richard Perez
ukubuka Izinsizakalo Zokuhlola Ikhaya eshicilelwe 4 years ago
Ukuhlolwa kwasekhaya kungukuhlolwa okulinganiselwe, okungahlaseli ngesimo sekhaya, kaningi maqondana nokuthengiswa kwalelo khaya. Ukuhlolwa kwasekhaya kuvame ukwenziwa ngumhloli wasekhaya onokuqeqeshwa nezitifiketi zokwenza lokho kuhlolwa. Umhloli ulungiselela futhi anikeze iklayenti umbiko obhaliwe wokutholakele. Iklayenti bese lisebenzisa ulwazi olutholakele ukwenza izinqumo ezinolwazi ngokuthenga kwazo okuthe kusalindwa. Umhloli wekhaya uchaza isimo sekhaya ngaleso sikhathi sokuhlolwa kodwa akaqinisekisi isimo esizayo, ukusebenza kahle, noma isikhathi sokuphila kwezinhlelo noma ngezinto.  Umhloli wasekhaya kwesinye isikhathi udidaniswa ne-appraiser yezezakhiwo. Umhloli wekhaya unquma isimo sesakhiwo, kanti i-appraiser inquma inani lesakhiwo. E-United States, yize kungezona zonke izifundazwe noma omasipala abalawula abahloli bamakhaya, kunezinhlangano ezinhlobonhlobo zabahloli bamakhaya ezihlinzeka ngemfundo, ukuqeqeshwa, namathuba wokuxhumana. Ukuhlolwa kwekhaya okuchwepheshile ukuhlolwa kwesimo sendlu yamanje. Akusikho ukuhlola ukuqinisekisa ukuhambisana namakhodi afanele; ukuhlolwa kwesakhiwo yigama elivame ukusetshenziselwa ukuhlolwa kokulandela ikhodi yokwakha e-United States. Ukuhlolwa okufanayo kepha okuyinkimbinkimbi kokuhlola izakhiwo zezentengiso kuhlolwa isimo sesakhiwo. Ukuhlolwa kwasekhaya kukhomba izinkinga kepha okwakha ukuhlonza kukhomba izixazululo zezinkinga ezitholakele nemiphumela yazo ebikezelwe.